Sidee loo hagaajiyaa sifooyinka ALT - Talooyin fudud
Qaar ka mid ah websaydaradu waxay xiraan sawirada laga soo xiganayo robots.txt caddaynta, halka kuwa kale aysan saxeexin sawirada badeecadooda iyo adeegyadooda sifooyinka ALT. Koox kale oo ka mid ah websaydhku waxay isticmaalaan sifooyinka ALT ee aan aqoon u lahayn, sida ereyada muhiimka ah iyo odhaahyada ama erayga "image" ku qor Altiga Qoraalka - wildleder. Sida webmaster ahaan, waa inaad isticmaashaa sifooyinka hoose ee habboon.
Frank Abagnale, oo ah Semt Maamulaha Guusha Macaamiisha, ayaa sheegaya in marka ay timaado raadinta sawirada, waxaad arki doontaa qaar ka mid ah sawirradaada natiijooyinka raadinta Google. Laakiin taasi waa suurtogalnimada marka aad ku sawirto sawiradaada SEO. Marka qof uu raadiyo ereyo ama odhaah gaar ah, isaga / iyada ayaa loo diri doonaa website-kaaga
Ku xafid sawiradaada natiijooyinka bogga hore:
Waxyaabaha ugu muhiimsan ee aad xasuusato waa sida loo sheego Google, Bing, iyo Yahoo oo ku saabsan nooca sawirkaaga. Sifooyinka hoose waxaa loo adeegsadaa dukumiintiyada XHTML iyo HTML si ay u muujiyaan qoraalka hoose (qoraal kale) kaas oo bixin doona marka walxaha loo adeegsaday aan la qaadi karin
Laga soo bilaabo tusaalooyinka hoos ku xusan, waxan hubinaynaa sida loo abuuro astaamaha hoose ee sawirkaaga:
"Sawirka 1" - waa xulasho aan faa'iido lahayn mana aha sharraxaad. Maqnaanshaha qoraalka faa'iido leh iyo qoraalka warbxinta ah ayaa u xun sawirrada muuqaalka leh
"Wiil dhalinyaro ah waa kalluumeysi" - waa faahfaahin fiican ee sawirkaaga, laakiin maaha mid ku habboon bogagga ganacsiga.
Sida loo sameeyo sifooyinka hoose ee masawiradaada
Halkan waxaa ah shanta mabda'a ee qorista sifooyinka saxda ah ee sawiradaada:
1. Faahfaahin degdeg ah oo faa'iido leh oo sawirkaaga ah:
Haddii faahfaahinta sawirkaagu uusan ku dhejin mowduuceeda, sawirku marnaba ma helayaan guji kasta oo ka soo baxa raadinta..Nasiib wanaag, WordPress iyo nidaamyada maareynta maadooyinka kale waxay abuuraan sifooyinka hoose ee si toos ah. Laakiin waa inaad had iyo jeer baartaa qaybtan ka hor inta aanad ku daabicin sawirkaaga bogga.
2. Wadarta dhererka sifooyinka hoose:
Dhammaan dhererka astaantaada hoose waa inuu ahaado saddex illaa afar eray laakiin aan ka badnayn 200 oo xaraf. Haddii aad isticmaashid wax ka yar saddex eray, waxay kugu adkaan doontaa inaad ku sharaxdo sawirkaaga. Sida xadka sare, Google, Bing, iyo Yahoo waxay tixgeliyaan astaamaha 255 ee sifooyinka hoose si ay u aqoonsadaan sawiradaada
3. Isticmaal ereyga muhiimka ah ee astaamaha hoose ee sawirka:
Sida xarfaha (H1, H2, H3, H4, iyo H5) iyo cinwaanka cinwaanka, waa inaad isticmaashaa erayga muhiimka ah ee ku yaal astaanta masawirkaaga. Si kale hadii loo dhigo, waxaan dhihi karnaa in sifududka hoose waa inuu ku jiraa macluumaad qiimo leh, oo kuu fududeynaya inaad kor u qaaddid content
4. Ha isbinayn:
Sifooyinka sare ee sarreysa iyo kuwa aad u sareeya waxay soo saari doonaan ciqaabta cunsuriyada Yahoo, Bing, iyo Google. Sidaa darteed, waa inaad gashaa ereyada muhiimka ah ama odhaahda ee astaamaha hoose iyo xaddid lambarkooda saddex ilaa shan. Uma baahnid inaad isticmaasho erayada sida "online," "qiimo," "iibsasho", "image," iyo "website" ee sifooyinkaaga hoose.
5. Ha ku qorin sifooyinka hoose ee sawirrada sawirada:
Haddii website-kaagu leeyahay sawiro farshaxan oo badan, uma baahnid inaad qoraysid sifooyinka hoose ee sawiradaas. Ka sokow, sawirada fallaarada, badhamada, xayawaanka, xayawaanka, shimbiraha, iyo dabiiciga ayaa ka wanaagsan inay ka tagaan madhan.
Haddii aad leedahay shabakado badan, waa inaadan hoos udhigin muhiimada sifooyinka hoose iyo sawirada sare ee qaraarka. Haddii aad dukaanka ku darto alaab cusub ama qor qoraalka blogka, waa inaad si fiican u habboonaato sawirada si haboon